Shiinaha VIV QINGDAO 2019 – Shandong E, Soo-saareyaasha S2-D004 ee Fine | E.Fine
SHANDONG E.FINE PHARMACY CO., LTD wuxuu ka qeybgali doonaa bandhiga VIV Qingdao, 19-21th Sep.
Kaambiyada Maya.: S2-004, Ku soo dhowow inaad booqato qolkeenna!
VIV waxay diyaarin doontaa aag bandhig si ay u soo bandhigto tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo xalal wax ku ool ah oo loogu talagalay horumarinta hidda-wadaha mustaqbalka ee doofaarka. (Isha Sawirka: VIV Qingdao 2019)
Bandhigu wuxuu soo bandhigi doonaa 600 oo bandhig sanadka 2019 waxaana la rajeynayaa inuu soo jiito in kabadan 30,000 oo booqashooyin ah, oo ay kujiraan in kabadan 200 oo hogaamiyaasha warshadaha. Qiyaastii 20 aqoon-isweydaarsiyo caalami ah oo falanqeynaya warshadaha Shiinaha iyo sidoo kale xalka ugu fiican ee arrimaha hadda jira ee xannaanada xoolaha ayaa sii xoojin doona fikradda bandhigga-cuntada.
Qabanqaabiyuhu wuxuu ku dhawaaqay in diiwaangelinta onlaynka ah ee booqdayaasha xirfadleyda ah ay hadda furan yihiin. Booqdeyaasha caalamiga ah waxay iska diiwaangelin karaan shabakadda rasmiga ah ee VIV Qingdao www.vivchina.nl. Qabanqaabiyuhu wuxuu raaciyay in bogga diiwaangelinta Shiinaha sidoo kale laga heli karo koontada rasmiga ah ee show-ga Wechat: VIVworldwide.
Nidaamka isdiiwaangalinta ee VIV Qingdao ayaa loo furay shacabka Shiinaha 18 May. Qabanqaabiye ayaa bilaabay olole suuq geyn ah oo gaar ah 'Panda-Pepsi-Present' munaasabadan, oo soo jiidatay in kabadan 1,000 soo booqdeyaal ah oo si guul leh uga diiwaangaliyay VIV Qingdao 2019.
Si loo wanaajiyo baahida ganacsi ee soosaarayaasha iyo iibsadayaasha xirfadleyda ah sannadka 2019, VIV Qingdao wuxuu soo bandhigi doonaa barnaamij iibsade Marti-heyn heersare ah. Codsiyada ka socda dalal kala duwan, sida Iran, Vietnam, South Korea, Kazakhstan, India, iyo kuwo kaloo badan, ayaa durbadiiba gaadhay qabanqaabiyeyaasha bandhig.
Isla mar ahaantaana, ilaa bishii Maajo, VIV wuxuu bilaabay inuu martiqaado iibsadayaasha adduunka. Barnaamijku wuxuu u furan yahay xirfadleyda iyo go'aan-qaadeyaasha leh qorshayaal wax gadasho oo firfircoon oo ka shaqeeya beeraha waaweyn, warshadaha quudinta, gawraca, warshadaha wax lagu karsado, shirkadaha qaybinta, iwm. Markii si guul leh loo dabaqo, VIV Qingdao waxay bixin doontaa adeegyo khaas ah oo ay ka mid yihiin hoy iyo dib-u-celin .
VIV iyo GPGS waxay ku dhawaaqeen iskaashi istiraatiiji ah Madasha Hormarinta Hormarinta Hilibka Caalamiga ah (GPGS) inay soo dhaweynayaan is biirsaday 16ka Maajo. VIV waxay dejin doontaa Bandhiga Caalamiga ah ee Horumarinta Hiddaha ee 'Vig Qingdao 2019' oo ay weheliso GPGS.
Aaggan wuxuu soo bandhigi doonaa tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo xalal wax ku ool ah oo loogu talagalay horumarinta hidda-wadaha ee doofaarka mustaqbalka. Khubaro xirfadlayaal ah iyo shirkado horseed ka ah taranka doofaarka oo ka kala yimid adduunka oo dhan ayaa lagu casuumi doonaa bandhiga si ay u wadaagaan khibradooda iyo isdhaafsiga macluumaadka.
Shirkadaha taranka ee doofaarka dibedda sida Cooperl development development, Topigs, Hypor, Genesus, Danbred, NSR, PIC, iyo khubaro ka socota Netherlands Agro & Xarunta Tiknolojiyadda Cuntada (NAFTC), Pig Academy Faransiiska, Huanshan Group, Jaamacadda Beeraha Sichuan, Jaamacadda New Hope Group, Jaamacadda Beeraha ee Shiinaha, Wens, Henan Jing Wang, TQLS Group, COFCO, Chengdu Wangjiang, Shaffer Genetics, Beijing Whiteshre, Shaanxi Shiyang Group, waxay iskugu yimaadeen GPGS 2019 si ay ula wadaagaan guulaha farsamada ee marxaladda hadda jirta iyo ka wada hadlida mustaqbalka horumarinta hiddo-wadaha.
Waqtiga boostada: Jul-29-2019
Feed Idaha , 3-Hydroxy-N- methyl-3-Phenyl-Pr , Cattle Feed Waxyaabaha ay ka kooban , Cattle aqristaha badalidda , aqristaha daro Betaine HCL , Feed daro,